【Abakhweli】Hubu Lane丨Tanhualin丨Museum丨Yellow Crane Tower丨Chu River Han Street丨Xinhe Street Metro Station丨I-King Bed ekhululekileyoImitha enye yokuLangaamagumbi okulala ama-2 - I-Airbnb
【Abakhweli】Hubu Lane丨Tanhualin丨Museum丨Yellow Crane Tower丨Chu River Han Street丨Xinhe Street Metro Station丨I-King Bed ekhululekileyoImitha enye yokuLangaamagumbi okulala ama-2
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e indlu sinombuki zindwendwe onguBigo
-Indawo engundoqo: Indawo yepropathi, iimeko zendlela: Le ndlu ibekwe kwindawo engundoqo yeWuchang, kwaye ikumgama wokuhamba weTanhualin, iYellow Crane Tower, iHubu Lane, iXinhai Revolution Museum, iWuchang River Beach kunye nezinye izinto ezinomtsalane ngeenyawo. okanye ekwabelwana ngebhayisekile. Ikumgama oziimitha ezingama-200 ukusuka kwiSitishi sika-D saseXiajiajia somgca weMetro 2. Ukusuka apha, unokuthatha iindawo ezimbini zokumisa i-subway ukuya eHankou, kwiSitalato iJianghan Road Pedestrian, iSakhiwo saseJianghanguan, iJiangtan Park, iWuhan Science and Technology Museum, iLihuangpi Road, iSiming Bank, iCawa yamaKatolika, iHubei Gongjinhui, indawo yeNkomfa ye-7 ka-Agasti, iJiqing. Street, owayesakuba iziza Soong Ching Ling kaThixo yokuhlala nowayesakuba omela kumazwe ahlukeneyo kunye nezinye ezinika basondele busondele. Unako kwakhona ukuya Wuhan University, Huazhong Normal University, Huake kunye namanye amaziko emfundo ephakamileyo ngqo empuma, kwaye namava umoya wothando phantsi kwemithi cherry ngase-East Lake.
【Intshayelelo yezindlu nezindlu】
-Isitayile soncwadi se-IKEA
- Uhlobo lwendlu luphezulu elinamagumbi amabini okulala, kunye noyilo olufanelekileyo kunye nokukhanya okwaneleyo.
- Uxhotyiswe ngebhedi enkulu ekhululekile kunye nomandlalo, ndiyakholelwa ukuba uya kulala ubusuku obuhle, igumbi lokulala lixhotyiswe nge-air conditioning, indawo ye-hanger, i-LCD TV enkulu kwigumbi lokuhlala, i-WIFI yamahhala, kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo, ukuba ufuna ukupheka, ikhitshi ikhululekile owanikiweyo.
- Molo Engaqhelekanga, Ndisebenza njengomyili ezitofotofo Ndicinga ukuba ngumyili ezintsha, ungakwazi noba ukufunda ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi engcono uyilo, okanye uhambo, umzimba wakho nengqondo kusoloko Omnye endleleni.. Sijonge phambili kumabali amnandi ngakumbi kunye nokudibana nabantu abanomdla ngakumbi. Wamkelekile kwikhaya lam, ndikunqwenelela ukuhlala okumnandi, kule ndawo ikhululekile kwaye ikhululekile
I-B&B yabahlali isoloko igxininisa kuyilo kunye nomgangatho, kwaye inyanzelisa ukubonelela ngenkonzo yebhulu enyanisekileyo kuye wonke umhambi. Izindlu eziboniswayo zigubungela izixeko ezingama-65+ ezibandakanya iGuangzhou, iBeijing, iShanghai, iChengdu, iChongqing, iHangzhou, iWuhan, njl.
【Unikezelo lwenyanga ngeRenti】
-Irenti yenyanga yinyanga eyi-1 ukuya kwiinyanga ezi-3, sikunika iphakheji yamanzi, umbane, igesi, ipropati, i-intanethi, i-cable TV, kunye neendleko ze-30% yentlawulo yegumbi. Emva kokuba kufakwe umyalelo wenyanga wokurenta, umgcini wendlu uya kusayina isivumelwano kunye nawe kwaye asebenzise iinkcukacha zekhontrakthi.
-Irenti yenyanga yeenyanga ezi-4 okanye ngaphezulu: amanzi, umbane, igesi, ipropati, i-intanethi, kunye neentlawulo ze-TV ze-cable zixhomekeke kwisehlo sokwenyani kwaye zilungiswe ngeshedyuli. Emva kokuba kufakwe umyalelo wenyanga wokurenta, umgcini wendlu uya kusayina isivumelwano kunye nawe kwaye asebenzise iinkcukacha zekhontrakthi.
[Ukuba ufuna ukuhlawula ipropati, nceda uhlawule i-10% yerhafu ngaphandle kweintanethi kwaye uqhagamshelane nomgcini-ndlu ukuze akhuphe i-invoyisi ye-VAT eqhelekileyo. Iindwendwe ezibhukisha ngaphezu kweentsuku ezingama-30 kufuneka zihlawule irenti yenyanga ezi-2 ezongezelelweyo njengedipozithi, kwaye zihlawule ezinye iifizi ngeendlela ezahlukeneyo eziya kubuyiselwa emva kokutsalwa kweemali eziziintlobo ngeentlobo emva kokuphuma]
[Inkcubeko yobumelwane] Indawo yePropati kunye neemeko zendlela: Le ndlu ibekwe kwindawo engundoqo yeWuchang, kwaye ikumgama wokuhamba weTanhualin, iYellow Crane Tower, iHubu Lane, iXinhai Revolution Museum, iWuchang River Beach kunye nezinye izinto ezinomtsalane ngeenyawo okanye ngebhayisekile ekwabelwana. up. Ikumgama oziimitha ezingama-200 ukusuka kwiSitishi sika-D saseXiajiajia somgca weMetro 2. Ukusuka apha, unokuthatha iindawo ezimbini zokumisa i-subway ukuya eHankou, kwiSitalato iJianghan Road Pedestrian, iSakhiwo saseJianghanguan, iJiangtan Park, iWuhan Science and Technology Museum, iLihuangpi Road, iSiming Bank, iCawa yamaKatolika, iHubei Gongjinhui, indawo yeNkomfa ye-7 ka-Agasti, iJiqing. Street, owayesakuba iziza Soong Ching Ling kaThixo yokuhlala nowayesakuba omela kumazwe ahlukeneyo kunye nezinye ezinika basondele busondele. Unako kwakhona ukuya Wuhan University, Huazhong Normal University, Huake kunye namanye amaziko emfundo ephakamileyo ngqo empuma, kwaye namava umoya wothando phantsi kwemithi cherry ngase-East Lake.
Umbuki zindwendwe ngu- Bigo